संगीत एल्बम कभर सुझाव र उदाहरण | अनलाइन क्रिएटिभहरू
संगीत एल्बम कभर सुझाव र उदाहरणहरू
आइरिस गेमन | 11/05/2022 13:44 | प्रेरणा
आजको पोष्टमा, हामी तपाईलाई एउटा सानो गाईड दिनेछौं संगीत एल्बम कभरमा हराइरहेको तत्वहरू, केहि सबैभन्दा प्रतिष्ठित को बारे मा कुरा गर्न को लागी। हामी संगीत प्रेमीहरूको ध्यान खिच्ने रेकर्ड कभर कसरी बनाउने भन्ने बारे कुरा गर्नेछौं। यो गर्नको लागि, हामी तपाईंलाई धेरै उपयोगी सुझावहरूको साथसाथै सफलता प्राप्त गर्नका लागि युक्तिहरूको श्रृंखला प्रदान गर्नेछौं।
संगीत एक हो एक अस्थायी अनुक्रममा सङ्कलन विभिन्न ध्वनिहरू संयोजन गर्ने कला हार्मोनिक नियमहरू पछ्याउँदै। ध्वनीहरूको यो सेट भनेको हामी सबैले हाम्रो दैनिक जीवनमा सुन्ने कुरा हो र जसलाई हामी विभिन्न मुडहरू मार्फत जाँदा फर्कन्छौं।
म्युजिकल एल्बमको कभरमा काम गर्ने डिजाइन ए तपाईंको आफ्नै ब्रान्ड निर्माण गर्ने प्रक्रिया। यो आफ्नै शैली र संगीत पछाडिको इतिहासको प्रतिबिम्ब हो। हामी मध्ये धेरै जब हामी नयाँ संगीतको खोजीमा जान्छौं, धेरै अवसरहरूमा हामी यसको उत्कृष्ट अपीलको कारण एल्बम कभर मार्फत फिल्टर गर्छौं।
1 के राम्रो संगीत एल्बम कभर महत्त्वपूर्ण छ?
2 संगीत एल्बम कभरको डिजाइनका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू
3 इतिहासमा प्रसिद्ध संगीत एल्बम कभर
3.1 अलादिन साने, 1973। डेभिड बोवी
3.2 कुनै कुरा छैन, 1991। निर्वाण
3.3 मखमली भूमिगत र निको, 1967
3.4 चन्द्रमाको अँध्यारो पक्ष, 1973। पिंक फ्लोयड
3.5 बाँच्नुहोस्! टकीला!, 1980
3.6 द रामन्स, 1976
3.7 एबे रोड, 1969। द बीटल्स
के राम्रो संगीत एल्बम कभर महत्त्वपूर्ण छ?
यस प्रश्नको जवाफ निस्सन्देह, हो।। सङ्गीत र छवि दुई कलाहरू हुन् जुन केही वर्षदेखि हातमा गएका छन्, किनकि यो सधैं यसरी भएको छैन।
हामी भन्दछौं कि तिनीहरू सधैं उत्तम जोडी होइनन्, किनकि, 20 को दौडान, कभरहरूमा डिस्कलाई सुरक्षित गर्ने कार्य मात्र थियो। वर्ष बित्दै गयो र तपाईं आफ्नो ४० वर्ष पुग्नुभयो, तब संगीत उद्योगमा ठूलो परिवर्तन आयो।
एलेक्स स्टेनवेइस, कला थप्ने महान विचार थियो बोरिङ र्यापरहरूमा जसले डिस्कलाई सुरक्षित गर्यो। उनको डिजाइनको लागि धन्यवाद, सांगीतिक एल्बमहरूको बिक्री बढ्यो र यसको साथ, आज हामी के थाहा छ रेकर्ड कभरको रूपमा जन्मिएको थियो।
आज, थोरै रेकर्डहरू भौतिक रूपमा बेचिन्छन्, हामी बस्ने डिजिटल संसारमा, अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा सुनेका र खरिद गरिएका सङ्गीतहरूले स्थान प्राप्त गरेको छ। यसमा पनि डिजिटल युगमा यो एल्बमको प्रचार र वितरणको लागि कभर डिजाइन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो एक निर्णायक चरण बनेको छ।
राम्रो संगीत एल्बम कभरले मानिसहरूलाई बनाउँछ उक्त एल्बममा सुन्न सकिने संगीतको बारेमा एउटा विचार सिर्जना गरिएको छ। तिनीहरू जनताको लागि खुलासा जस्तै छन्, तिनीहरूले के सुन्न जाँदैछन् र तिनीहरूले ब्यान्डको दर्शन मात्र होइन तर तिनीहरू संगीतको पछाडि कसरी छन् भनेर पनि देखाउन सक्छन्।
एल्बमको आवरणमा सफल भएको सही डिजाइनले अन्य समर्थनहरूको लागि प्रभावको रूपमा कार्य गर्दछ कन्सर्टहरूका लागि पोस्टरहरू, कपडा डिजाइनहरू, थप व्यापारिक उत्पादनहरू, अरूहरू बीचमा।
संगीत एल्बम कभरको डिजाइनका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू
एल्बमको आवरणले ब्यान्ड वा कलाकार को हो भन्ने बारे धेरै कुरा बताउँछ। एकान्तमा। यो एक समर्थन हो, जसमा तपाईं उच्च स्तरमा आफ्नो रचनात्मकता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर सँधै केही नियमहरूको सम्मान गर्दै जुन तपाईंले सफल डिजाइन सुनिश्चित गर्न पालना गर्नुपर्छ।
स्केच चरण र त्यसपछिको डिजाइन चरण सुरु गर्नु अघि गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको ए बनाउनु हो कलात्मक शैलीमा अनुसन्धान जसले आवरण डिजाइनलाई जीवनमा ल्याउनेछ। तपाईंले अन्य कभर डिजाइनहरूको सन्दर्भहरू खोज्न सक्नुहुन्छ, तर सधैं तपाईंले काम गरिरहनुभएको ब्यान्ड वा कलाकारको बारेमा जानकारीलाई ध्यानमा राख्दै।
तपाईं स्पष्ट हुनु पर्छ तिनीहरू के भन्न चाहन्छन्, तिनीहरू कलाकारको रूपमा को हुन्, तिनीहरूको सांगीतिक विधा, तिनीहरूका श्रोताहरू, आदि।। हामीलाई पहिले नै थाहा छ, त्यहाँ विभिन्न कलात्मक शैलीहरू छन् जसमा तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ, चित्रकारी, अधिक प्रयोगात्मक शैली, फोटोग्राफी, पुरानो रेट्रो शैली, चित्रण, minimalism, कुरूपता, अन्य धेरै शैलीहरू बीच।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो काम गर्न छवि फाइलको आकार। सामान्यतया, मानक अधिकतम आकार 3000 x 3000 पिक्सेल वा 1400 x 1400 न्यूनतम हुन्छ। तपाइँ एक उपाय प्रयोग गर्नुहुन्छ वा अर्को प्रकाशित हुने ढाँचामा निर्भर हुनेछ।
हामी तपाईंलाई त्यो सम्झाउँछौं छविहरू वा स्पष्ट शब्दावलीको साथ कामहरू स्वीकार गरिँदैन। अर्थात्, अश्लील तस्विर, हिंसा, लागूपदार्थ, भेदभाव वा कुनै पनि सम्बन्धित विषयलाई स्वीकार गरिने छैन। यदि गीतहरू वा स्पष्ट भाषाका शब्दहरू देखा पर्छन् भने, एल्बममा यी शब्दहरू समावेश भएको आइकन थप्न आवश्यक हुनेछ।
जब तपाइँसँग पहिले नै तपाइँको सन्दर्भ को संग्रह खोजी छ, तपाइँ त्यो महसुस गर्नुहुनेछ टाइपोग्राफी र रंग दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन् कुनै पनि ग्राफिक परियोजना को डिजाइन मा खाता मा लिन।
कलाकार वा कलाकारहरूको नाम राख्नु सामान्यतया पसलहरूमा बेचिने रेकर्डहरूको लागि धेरै सामान्य कुरा हो, अब जब धेरै संगीत इन्टरनेटमा चल्छ, यो यति आवश्यक नहुन सक्छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यसलाई विभिन्न तरिकामा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, ठूलो, रणनीतिक रूपमा सानो, यसलाई नराख्नु, आदि। तपाईको दिमागमा रहेको डिजाइनमा जुनसुकै राम्रो फिट हुन्छ।
हामी तपाईंलाई एउटा नोटबुक वा एजेन्डा हातमा राख्न सल्लाह दिन्छौं, तपाईंले काम गर्ने माध्यम र तत्वहरूको सूची जसले तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छ, एक धेरै उपयोगी प्रविधि मुड बोर्ड बनाउनु हो। यदि तपाईलाई कसरी बनाउने थाहा छैन भने, हामी तपाईलाई यो लेख छोड्छौं जहाँ हामी तपाईलाई व्याख्या गर्छौं। यी सबैले तपाइँलाई तपाइँको डिजाइन कसरी जान सक्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टि पाउन मद्दत गर्दछ।
जब तपाइँसँग सबै तत्वहरू परिभाषित छन्, यो हो स्केचिङ चरणमा जानको लागि समय। तपाईले तत्वहरूलाई फरक पारेर, थपेर, हटाउने, आदि गरेर एक वा बढी स्केचहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाले तपाइँलाई तपाइँको कभर डिजाइन अधिक सजिलै र निश्चित रूपमा कल्पना गर्न मद्दत गर्नेछ।
अन्ततः, डिजाइन चरणमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि सबै कुरा कसरी आकार लिइरहेको छ, आफ्नो शैली भएको र आफ्नो प्रारम्भिक विचारलाई जीवन दिने।
इतिहासमा प्रसिद्ध संगीत एल्बम कभर
यस खण्डमा हामीले इतिहासको सबैभन्दा प्रसिद्ध संगीत एल्बम कभरहरू संकलन गरेका छौं।
अलादिन साने, 1973। डेभिड बोवी
कुनै कुरा छैन, 1991। निर्वाण
मखमली भूमिगत र निको, 1967
चन्द्रमाको अँध्यारो पक्ष, 1973। पिंक फ्लोयड
बाँच्नुहोस्! टकीला!, 1980
द रामन्स, 1976
एबे रोड, 1969। द बीटल्स
म्युजिकल एल्बम कभर डिजाइन गर्ने कला धेरै वर्ष अघिको जस्तो विस्मरणमा परेको छैन। यो एक कला हो जुन आज पनि अवस्थित छ र यसले सानो ढाँचामा विभिन्न शैली र व्यक्तित्वहरू सङ्कलन गर्दछ।
यी कभरहरूको डिजाइन मात्र चम्किलो र आकर्षक पनि हुनु हुँदैन, तर विचारहरू, विश्वासहरू, व्यक्तित्व र दर्शनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। तपाईंले आफ्नो संगीत सुन्न विभिन्न जनतालाई आमन्त्रित गर्नुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » संगीत एल्बम कभर सुझाव र उदाहरणहरू
Illustrator मा खोपडी कसरी कोर्ने